सेशेल्स, प्रमोदवन मा सबै भन्दा राम्रो छुट्टी को लागी कुन टापु छनौट गर्न | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | मार्गदर्शकहरू, सेशेल्स टापु
पक्कै पनि युरोपमा सब भन्दा सुन्दर र उपयोगी समुद्री तट गन्तव्य मध्ये एक, यदि कसैले भूमध्यसागरको किनारमा अन्त्य गर्न चाहँदैन भने, ती हुन् सेशेल्स टापु। यो एक समूह हो हिन्द महासागरमा ११ 115 टापुहरू, सेतो बालुवा, न्यानो मौसम, हरियो जंगल, दालचीनी रूखहरू र सुखद शान्ति।
म कसैलाई चिन्दिन छैन जसले सेशेल्सको आनन्द उठाएनन्, त्यसैले यदि यस गर्मीमा तपाईं तिनीहरूलाई जान्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने, यहाँ केहि प्रश्नहरू छन् जुन तपाईंले ध्यानमा राख्नु पर्दछ "अनुभवबाट अधिक लाभ लिनुहोस्" र थाहा पाउनुहोस्। सेशल्स कुन टापुमा छनौट गर्नुहोस्.
1 सेशेल्स टापुहरू
2 प्रशलीन टापु
4 ला डिग
टापुहरू तिनीहरू अफ्रिकी तटबाट एक हजार किलोमिटर भन्दा टाढा छन्, मोरीशस वा मडागास्करको क्षेत्रमा। टापुको राजधानी भिक्टोरिया हो र कुल जनसंख्या n ००० को आसपास छ। यो अफ्रिकाको सब भन्दा सानो स्वतन्त्र राज्य हो र यो स्वतन्त्रता १ 1976 XNUMX मा प्राप्त भयो जब यो यूनाइटेड किंगडमको हो, यद्यपि यो कमनवेल्थको हिस्सा हो।
हाल त्यहाँ केवल १ is टापुहरू छन् जसले आवास प्रस्ताव गर्दछ त्यसैले जब तपाईं बस्नुहुनेछ भन्ने निर्णय गर्दा यी टापुहरूमा भएका अफरहरू जाँच गर्न सक्नुहुनेछ, यो यात्राको क्रममा पहिलो चरण हो। त्यहाँ पाँच सितारा श्रेणी होटलहरू छन् सबै विलासिताको साथ समुद्र तटमा अधिक देहाती होस्टल वा केबिनहरू। तसर्थ, तपाईंसँग धेरै पैसा छैन भने पनि, तपाईं यसलाई मजा लिन सक्नुहुन्छ।
ठाउँ, जे भए पनि यो सुन्दर छ र सबै टापुहरूमा तपाईंलाई अवसर छ पौंडी, सूर्यास्त, डाइभि,, स्नोरक्लि sn वा केवल सहरी रभ्स र आराम गर्नुहोस्।
यो दोस्रो ठूलो टापु हो समूहको र 6500 XNUMX०० मानिस बसोबास गर्दछ तर यो अझै पनि एक धेरै शान्त टापु हो, माहे भन्दा कम विकसित, उदाहरणका लागि, र सिफारिश गरियो यदि तपाईं आराम र आराम गर्न चाहनुहुन्छ भने मात्र समुद्री तटहरू सुन्दर छन् र ती मध्ये दुई प्रायः विश्वको सर्वश्रेष्ठ समुद्रतटहरू मध्ये एक हुन्: एन्से जियोजेट, कोटे डी ओर र अन्से लाजियो। यदि तपाइँ गोल्फ खेल्न चाहानुहुन्छ यो सेशेल्सको गन्तव्य हो किनकि योसँग १ hole होल गोल्फ कोर्स छ।
तपाईंले यो टापु छनौट गर्नुभएमा अरूलाई भेट्नबाट तपाईंलाई रोक्ने छैन किनकि तपाईं यसको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अन्वेषण र पैदल यात्रा को लागी आधार। तपाईं कुजिन टापुमा चराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, क्युउज टापुमा म mang्ग्रोभ र विशाल कासवाहरू, वा सेन्ट पियरेमा पौडी खेल्न र स्नोर्कल। प्रासलिनमा त्यहाँ तीनवटा बस्तीहरू छन्: बेई सेन्ट एनी, ग्रान्डे अन्से र एन्से भोलबर्ट। पछि यो व्यावहारिक रूपले बस्छ।
समुद्री तटहरू चारै तिर सुन्दर, पोष्टकार्ड उत्तम छ, फिरोज़ा पानी र पीठोको स्यान्डको साथ। समुद्री तटहरू प्रास्लिनको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा होत्यो र आरामदायी ब्याकप्याकर वाइब एक हो जुन प्रचलित हो, यद्यपि यदि तपाईं पाँच-सितारा रिसोर्ट चाहानुहुन्छ तपाईंसँग यो हुन सक्छ किनकि त्यहाँ दुई, राफल्स र लेमुरिया छन्, निजी समुद्री किनारका साथ, व्यक्तिगत क्याबिनहरू र तपाईंले चाहानु हुने सबै विलासिता। उत्तर तट दक्षिण भन्दा राम्रो छ, दिमागमा राख्नुहोस्। टापु वरिपरि सार्न त्यहाँ सस्तो बस र ट्याक्सी छन् तपाईंले भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईं कार भाडामा लिनुहुन्छ।
तपाईं कसरी प्रस्लिन गर्न? तपाईं डु Digue बाट La Digue बाट वा माहेरीबाट आइपुग्नुहुन्छ, म्याह बाट ama 45 मिनेटमा क्याटमारन यात्रामा वा ला डिगबाट मात्र १ 15 मा। यात्रा रमाईलो, स्वाभाविक, र गन्धक छ, त्यसैले तपाईं यसको सट्टामा विमान लिन सक्नुहुन्छ। La Digue बाट क्रसिंग शान्त र छोटो छ। यदि तपाईं एयर सेशेल्स द्वारा उडान गर्नुभयो भने तपाईं प्रस्लिनमा एक स्टप समावेश गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले विकल्पलाई विचार गर्नुहोस्।
माहमा si० वटा समुद्र तटहरू र गुप्त स्थानहरू जताततै लुकेका छन्। यसको एक धेरै रमणीय आन्तरिक छ, धेरै हरियो, र समुद्र किनारहरू सेता बालुवा छन्। संस्कृति क्रियोल हो र त्यहाँ शहर बाहेक साना गाउँहरू पनि छन्, माहेरी जस्तो यो सेशेल्सको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा जनसंख्या भएको टापु हो। भिक्टोरिया, राजधानी, यहाँ टापुको उत्तरपूर्वी तटमा छ।
यदि तपाईं धेरै सोच्न चाहनुहुन्न वा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटनबाट उम्कन चाहनुहुन्न भने, माहे तपाईंको गन्तव्य हुन सक्छ: त्यहाँ ज jun्गल छ, पर्वतहरू छन्, झरनाहरू छन्, समुद्र तटहरू छन्, तपाईं पानीको धेरै खेल गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य लोकप्रिय टापुहरू भन्दा तपाईं विविधताका सर्तहरूमा केही थप गतिविधिहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यसको उचित मापनमा सहरी र प्रकृतिको मिश्रण किनभने महे न्यु योर्क होईन।
मोर्ने सेचेलोइस नेश्नल पार्कले टापुलाई पश्चिमी र पूर्वी क्षेत्रमा विभाजित गर्दछ। यो उष्णकटिबंधीय जंगल हो जुन aks ०० मिटर अग्लो चुचुराहरू भएको छ। यदि तपाईं भिक्टोरियामा अवतरण गर्नुभयो भने तपाईं बस वा ट्याक्सी लिन सक्नुहुनेछ जुन रुटमा जान्छ र पहाडहरू पश्चिम तर्फ तिर जान्छ जहाँ राम्रो रिसोर्ट्स, शान्त पानी समुद्र तट र राम्रो मूल्यमा बढी स्वतन्त्र पर्यटक आवास हुन्छ। यहाँ एक लोकप्रिय गन्तव्य Beau Vallon स्पा हो तर यदि तपाईं जान जारी राख्नुभयो भने अरू धेरै राम्रा गाउँहरू र समुद्र तटहरू छन्, कम मानिसहरूका साथ।
अर्को रोचक गन्तव्य हो अन्से रोयल, रेस्टुरेन्ट, बजार र पसलहरूको साथ मध्यम आकारको शहर। दक्षिण तटमा तपाईले अरू बढि विकसित भएको भेट्टाउनु हुन्न तर तपाईले महेमा केही उत्तम समुद्र तटहरू भेट्टाउनुहुनेछ। के तपाईं आफूलाई Paslin वा La Digue को समुद्री तटमा तुलना गर्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाइँ सपना समुद्र तट हो भने, म यी दुई टापुहरू मध्ये कुनै छनौट खराब, छनौट गर्दछु माहे एक रोचक कम्बो प्रदान गर्दछ यदि तपाईं एक परिवार को रूप मा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ।
त्यो मेरो निर्णय हुनेछ: माहे परिवार बढी सिफारिस गरिएको छ.
यो सबैभन्दा सानो टापु हो बसोबास टापु को। त्यहाँ २ हजार मानिस बसिरहेका छन्, यसको कुनै एयरपोर्ट छैन र केहि मार्गहरू। यो सब भन्दा आराम र शान्त गन्तव्य हो केहि उत्तम र लोकप्रिय बीचहरू छन्। तपाईं प्रस्लिन वा माहेरीबाट ला डिगू चिन्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईं शान्त तरंग चाहानुहुन्छ भने यो तपाईंको गन्तव्य हुन सक्छ।
तपाईं पूर्वी तटमा ला पासे गाउँमा आइपुग्नुहुनेछ, जहाँबाट तपाईं प्रशलिन टापु देख्न सक्नुहुन्छ। गाउँहरु एक अर्को देखि धेरै टाढा छैन। उत्तम समुद्री तटहरू दक्षिणी तटमा छन्, डाँडाको अर्को पट्टि, अन्से स्रोत डी 'अर्जेन्टिना, पेटिट अनसे, ग्रान्ड अन्से, एन्से कोकोस। उत्तरमा एन्से गम्भीर र एन्से प्याटेस छ। यो जहिले पनि भनिन्छ कि सिचेल्सका सबै समुद्री तटहरूमध्ये सबैभन्दा सुन्दर सोर्स डी'अर्जेंट हो त्यसैले यसलाई नछुटाउनुहोस्।
स्वतन्त्रताको साथ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नको लागि तपाईं बाइक भाडामा लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं होटेलमा बस्नुहुन्छ भने, सम्भव छ कि तिनीहरूले तपाईंलाई यो नि: शुल्क दिन्छन् यदि त्यहाँ धेरै भाडा स्टोरहरू छन्। तपाईं खाना र पेय किन्नुहुन्छ र भ्रमणमा जानुहुन्छ, यो उत्तम छैन? त्यहाँ केही ट्याक्सीहरू छन् र दरहरू त्यति सस्तो छैनन्, यद्यपि तपाईं आधा दिन वा सम्पूर्ण दिन भाडामा लिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईं बाइक चलाउन चाहानु हुन्न भने। त्यहाँ एक बस सेवा छ जुन तपाईंलाई यस टापुको वरिपरि पनि लैजान्छ।
विलासी आवासको लागि त्यहाँ एक मात्र विकल्प छ: La Domaine De L'Orangerie। पछि त्यहाँ साना बुटिक होटलहरू र केही पारिवारिक होटलहरू छन् भान्छाको साथ। अधिकांश आवास शहरमा हो, समुद्र तटमा होइन, तर टापु सानो भएकोले तपाईं समुद्रबाट कहिल्यै टाढा हुनुहुन्न। र कसरी La Digue मा पुग्ने? प्रशलिनबाट एक दिनमा सातवटा फेरीहरू छन्। यात्रा १ 15 मिनेट हो र १ 15 यूरो लाग्छ।
महे देखि त्यहाँ सीधा केहि छैन त्यसोभए तपाईं डु by्गामा प्रासलिन जानु पर्छ र त्यहाँबाट ला डिगु जानु पर्छ तर यो एकल टिकटको साथ गरियो। त्यहाँ प्रति दिन दुई सेवाहरू छन् र टिकटको लागत 65 XNUMX यूरो। थोरै महँगो, हैन त?
माहे, प्रॅस्लिन र ला Digue यसैले Syechelle को तीन सबसे अधिक पर्यटन टापु हो। सबै तीन समान रूप मा सुन्दर छन्, ती मध्ये कुनैले पनि तपाईलाई निराश पार्दैन, तर तपाईले कुन प्रकारको छुट्टीको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुहोस् जुन उनीहरू योग्य छन् तपाईलाई रमाउनको लागि। भाग्यमानी!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » मार्गदर्शकहरू » सेशेल्स, प्रमोदवनमा सबै भन्दा राम्रो बिदाका लागि कुन टापु छनौट गर्नुहोस्
एम्स्टर्डममा हेर्न र गर्न 8 कुराहरु
भेनिसमा 10 कार्यहरू गर्नु